International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: Press Release: Public Consultation Meeting on Article 18 of Freedom of Assembly and Freedom of Procession Law
Press Release: Public Consultation Meeting on Article 18 of Freedom of Assembly and Freedom of Procession Law
A public consultation meeting on Article 18 of Freedom of Assembly and Freedom of Procession Law was held on6November 2013 at the office of 88 Generation Peace and Open Society in Thingangyun Township, Yangon. The forum was attended by various types of civil society organizations including Human Rights and political activist organizations, and members of civil society who are facing charges under Article 18.
Participants shared their views on the law and agreed to formanetwork to campaign for elimination all kinds of restrictions on freedom of expression, including Article 18 of Freedom of Assembly and Freedom of Procession Law. An initial network comprised of committed participants was formed and the meeting decided to invite other interested parties to join the network.
It was decided that the network be named Freedom of Expression Network and mission of the Network are
to hold consultations and collectabroader public opinion on Article 18 of Freedom of Assembly and Freedom of Procession Law
to collect information of those who are already sentenced and are facing charges under the law
to collaborate with other groups with similar objectives
to submit public opinion to the government, parliament, constitutional court, political and other relevant organizations and bodies and to call on them for implementation
Initial members of the network are
Local Resources Center
Triangle Women Network
For more information please contact – Moe Thway 09 421087993, moethway@generationwave.org, Hlaing Myat 09 420077346 info-co@lrcmyanmar.org
ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထု၏ သဘောထားအမြင်များ ဆွေးနွေးပွဲ
ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၈) နှင့်ပတ် သက်၍ ပြည်သူလူထု၏ သဘောထား အမြင်များ ဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ဝင်ဘာလ ၆ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၈၈မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ရုံးခန်းတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့များ၊ အရက်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ပုဒ်မ (၁၈) ဖြင့် တရားစွဲဆို အရေးယူခံထားရသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
တက်ရောက်လာသူများမှ မိမိတို့၏ သဘောထားအမြင်များကို ဆွေးနွေး တင်ပြကြပြီး ပုဒ်မ (၁၈) အပါအဝင် ပြည်သူလူထု ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုများကို ပယ်ဖျက်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားကြရန် ကွန်ယက်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းရေး သဘော တူညီခဲ့ကြပါသည်။ ကွန်ယက်ကို ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ၊ အဖွဲ့အစည်း များ နှင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူများ ထပ်မံပါဝင် သွားနိုင်ရေးအတွက် ဖိတ်ခေါ်သွားရန်လည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
ကွန်ယက်၏ အမည်ကို လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်ကွန်ယက် ဟု ခေါ်ဆိုအသုံးပြု ရန် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကွန်ယက်မှ ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်သွားမည့် အချက်များ မှာ -
၁။ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၈) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထု၏ သဘောထားအမြင်များကို ပိုမိုကျယ်ပြန့် စွာ ဆွေးနွေးရယူသွားရန်
၂။ ပုဒ်မ (၁၈) ဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူများ၊ တရားရင်ဆိုင်နေရသူများ၏ စာရင်းများ ကောက်ယူပြုစုသွားရန်
၃။ အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်တူ အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားသွားရန်
၄။ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ အခြေခံဥပဒေခံရုံး၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းပြီး ပြည်သူ လူထု၏သဘောထားများကို တင်ပြတောင်းဆိုသွားရန် စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၁။ Generation Wave
၂။ Local Resources Center
၃။ ရန်ကုန်-လိုင်ဇာ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျောက်အဖွဲ့
၆။ Triangle Women Network
၈။ အင်ဂျင်နီယာများကွက်ယက် (ယာယီ)
၁၀။ Generation Youth
၁၂။ Peace Mission
၁၃။ Peace Network
ဆက်သွယ်ရန် - ကိုမိုဃ်းသွေး 09 421087993, moethway@generationwave.org, ကိုလှိုင်မြတ် 09 420077346 info-co@lrcmyanmar.org
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မြန်မာဘာသာကို PDF ဖိုင်အနေဖြင့် ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်